I-Dove Barn, uguqulo oluhle lwaseGeorgia
Bale, England, United Kingdom
IBanga lesi-II elihle lidweliswe uguqulo lweshedi, ejikelezwe sisitiya sayo sabucala kunye nendlela yokuqhuba, ebekwe phakathi kweqela leeshedi zabucala, ezimayile ezi-6 nje ukusuka elunxwemeni.
Umnyango wokungena ukhokelela kwindawo ebanzi, evulekileyo yokuhlala, indawo yokutyela kunye nekhitshi enemigangatho efakwe iithayile kunye nemiqadi yamaplanga yenkulungwane ye-18. Amagumbi okulala amakhulu aneebhedi zobukhulu benkosi, amagumbi ama-2 anokwenziwa abe ngawabantu abangabodwa xa kufuneka. 3 amagumbi okulala ezantsi, 1 phezulu. Samkela izinja ezi-2/3 eziziphethe kakuhle, ezinohambo oluhle ukusuka eshedini.
Beka kwi-coutryside enevenkile kunye nee-pubs kwiilali ezikufutshane. Ukuhamba okuthandekayo kanye ukusuka emnyango kunye neelwandle ezinobuhlobo nezinja ezikufutshane. Khusela igadi enkulu enegayiti emi-2 enye enedama elincinci elihle, ipatio, ibbq nangaphandle.
Amaphandle amahle, iilwandle ezintle kunye namaziko ezilwanyana zasendle. Iilali ezikufutshane ezizele zii-pubs ezithandekayo, imveliso yasekhaya, iindawo zokutyela kunye nokubona indawo. Idolophu yakudala yaseGeorgia yaseHolt ikumgama oziikhilomitha ezi-4 kuphela ibonelela ngeevenkile ezintle kunye neendawo zokutyela.
Ukuhlala ngokufanelekileyo kwilali elandelayo iimayile ezi-2 ezantsi kwendlela ndiyafumaneka ukuba ndiphendule nayiphi na imibuzo ngefowuni, i-imeyile okanye ngokobuqu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bale